Bilowga Diimaha – Kaasho Maanka
Diimuhu waxa ay ka soo bilowdeen in ay dadku la yaabeen dhimashada qofkii ay haleeshaa uusan soo laabanayn iyo jiritaanka siiba roobka, onkodka iyo hillaaca. Si waxyaalahaas jawaabo loogu helo ayaa laga fakarey in diimo ka hadlaya la sameeyo, waxaana maanta jira diimo dhowr ah oo waaweyn.
Hinduusimku waa diinta ugu fac weyn diimaha maanta jira, waana diin aan lahayn qof sameeyey ee ka kooban diimo, dhaqamo iyo aragtiyo badan oo midoobey. Waa diin aysan in la faafiyaa waajib ahayn sida masiixiyadda iyo islaamka, isla markaas qofkii aan iyada haysani denbiile iyo ehelu naar ma aha sida islaamka iyo masiixiyadda.
Buudisim waa diin sida Hinduusim ka soo baxday Hindiya, waxaana sameeyey nin Buuda la oran jirey oo 2500 ee gu’ laga joogo xilligii uu diintaas allifey. Diintaas cibaadadeedu waa tacliinta oo in wax la barto ayaa diin ahaan loo haystaa, waxaana la baranayaa wax kasta oo la baran karo. Wax ilaah ah diintaasi ma leh, qofkii aan haysan ama ka tagaana denbiile ma aha sida islaamka iyo masiixiyadda.
Yuhuudiyaddu waa diin waa hore samaynteeda la bilaabay, waxaana laga bilaabay dalka Ciraaq. Waa diin hal qolo khusaysa, waxa ayna qoladaasi rumaysan yihiin hal ilaah oo aan muuqan oo wax kasta ee kale abuuray. Waxa kale oo ay rumaysan yihiin in uu ilaahaasi iyaga ka doortay oo uu ka jecel yahay dadka kale oo dhan. Dhaqanka ah hal ilaah oo aan muuqan qoladaas ayaa keentay, waana dad aad u yar oo uu maanta badankoodu ku nool yahay Israa’iil iyo USA.
Masiixiyaddu waa diin uu asalkeedu ka soo jeedo aragtidii qolada yuhuudda ee ahayd in hal ilaah oo wax kasta abuuray uu jiro, laakiin waxaa aragtidaas lagu daray in uu ilaahaasi dhalay Ciise oo ahaa ninkii diintaas allifey. Diintaas asalkeeda waxaa looga jeedey in yuhuudda laga xoreeyo cadaadiskii roommaanka, cadaadiskaasina waxa uu keenay in Ciise laftiisii la diley. Diintaas qodobbadeeda waxaa ka mid ah in qofkii aan haysan ama ka baxaa uu denbiile ka yahay xagga Eebbe oo la dilayo, laakiin maanta ma uu jiro qof ka baxay oo la dilaa maaddaama ay dadkii diinta haystey ilbaxeen. Waa diin in la faafiyaa ay shuruucdeeda ka mid tahay.
Islaam waa diinta labaad xagga badnaanta dadka rumaysan, waxa ayna diintaasi ku tiirsan tahay aragtidii yuhuudda ee ahayd hal ilaah oo aan muuqani in uu wax kasta abuuray, laakiin waxaa la rumaysan yahay in dhaqankii yuhuudda uu ilaahaasi ku soo wareejiyey afka iyo ummadda carabta, wareejintaas ka dibna uusan ilaahaasi mar danbe diin keenayn oo ay arrin kastaa carabigaas ku xanniban tahay. Waxaa diintaas allifey nin Maxamed la oran jirey oo carab ahaa, waana diin qofkii aan haysan ama ka baxa isugu dartay in ay muslimiintu dilaan iyo in uu ehelu naar yahay oo uu ilaah u caraysan yahay. Waxaa sharciyada diintaas ka mid ah in la faafiyo oo weliba dagaal lagu faafiyo.
Dad aad u badan baa maanta rumaysan aqoonta ama cilmiga oo ka tegey khuraafaadka iyo diimaha, waxa ayna dadkaasi qabaan in aan la rumayn wax aan cilmi ahaan loo caddayn. Waxaa dunida ka muuqatay in uu cilmigu ka faa’iido badan yahay khuraafaadka iyo diimaha, waxaana caddaatay in meeshii cilmiga iyo maskaxda la kaashado uu horemar ka imanayo. Cilmigu wax been ah ku uu mashquulin mayo dadka oo wakhtigooda wax macquul ah bay uga faa’iidaysanayaan.
Diinta islaamku waa diin uu alleh soo dajiYaY
Mana aha diin uu bashar alifaY
kownkana alleh (swc) aYaa abuuray oo iska leh
Oo taasi waa maragma doon oo maanta
Gaal iYo muslimba waa la isku raacaY
In duunidan cid abuurtaY Oo kaligeed iska abuurmin
Aqoontan aad wax wayn aad uhaysato
Eed diinta islamka ka door bidaysana
Waa dadka oo malinba malinta ka danbaysa
Aqoon iyo garasha u yeelanaya
Kownkan uu alleh abuuray
Aqoontana waad barankarta adigoo diintada
Haysta oo wax diidaya ma jiro
Ee hadaad aminsantahay diinta islamku
Aqoontan maantay ka soo hor jeeda
La kaalay daliil cad
Ninkan waxa uu been abaa bulayo ayaan layaabanahay aayado been ah oo anan jirin sxb usheeg in diintan uu alle weyne subxanahuu watacaala soo dajiyay qof adigoo kale ahna ceebo ma uyeeli karo
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 8th October 2018